Register For Upcoming BarCamp Singapore6| My Burmese Blog
Register For Upcoming BarCamp Singapore 6	On August 26, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	BarCamp Singapore6Event ကို အခုလာမယ့် October 9, 10 (Sat And Sunday) ၂ ရက် ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Camp က Singapore ရဲ့ 2010 အတွင်းမှာ ဒုတိယမြောက် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ အခေါက် BarCamp SG5တုန်းက ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို BarCamp Singapore5မှာ ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်ကိုတော့ City Hall မှာ လုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Twitter hash tag က #BarCampSG6 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ စာအရဆိုရင် City Hall မှာ လုပ်မှာမို့ Internet ရှိပုံမရပါဘူး။ မေ့လို့ အရင်တစ်ခေါက်ကလဲ အင်တာနက် မရပါဘူး ဖုန်းကနေ tethering လုပ်သုံးခဲ့တာပဲ။ နောက် ရေဘူးယူခဲ့ဖို့ ပြောပါတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ စားစရာကော ရေကော အအေးကော ကော်ဖီကော အများကြီးပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သေချာမပြောတတ်ပါဘူး စလုံးပြန်ရင်လဲ ပြန်ဖြစ်ရင်သွားဖြစ်ပါမယ်.. မဟုတ်ရင် တရားစခန်းဝင်ချင်လဲ ၀င်ဖြစ်ဦးမယ်။ ခုထိတော့ passport လဲ သက်တမ်းမတိုးရသေးဘူး။ သူငယ်ချင်းများ စိတ်ဝင်စားရင် သွားလို့ ရအောင်/Register လုပ်လို့ရအောင် လက်တို့တာပါ။ BarCamp, Events, tech news	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=4+5Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts
Buddhist devotees pouring water on tree atapagoda as today is Vesak Day... #Yangon #vesak #vesakha… instagram.com/p/Zr8EHOwI41/2hours ago
Woolwich killing: meat cleaver, knife and jihadist claims filmed on mobile #UK guardian.co.uk/uk/2013/may/22… 22 hours ago